पत्रकार विजय कुमारले दिए डा. गोविन्द केसीलाई चेतावनी,’एकबारको जुनीमा शिक्षण अस्पतालको डिन बनेर चलाए कसो होला डाक्टर साब ?’ « Light Nepal
पत्रकार विजय कुमारले दिए डा. गोविन्द केसीलाई चेतावनी,’एकबारको जुनीमा शिक्षण अस्पतालको डिन बनेर चलाए कसो होला डाक्टर साब ?’
Published On : 11 January, 2018 9:50 pm
काठमाण्डौ, २७ पुष । पत्रकार विजय कुमारले डा गोविन्द केसीलाई डिन बनेर चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन चेतावनी दिएका छन् । उनले अरुको टिका टिप्पणी र विरोध गर्नु भन्दा आफै डिन बनेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
अन्नपुर्ण पोष्टमा आलेख लेख्दै सो पत्रिकाका सम्पादक समेत रहेका विजय कुमारले डा केसीलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले आफ्नो आलेखमा लेखेका छन्
‘डा. गोविन्द केसीज्यू, तपाईं ठूलो समाजसेवी चिकित्सक हो। तपाईंका प्रति मेरो सदावहार आदर हरअनशनपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने विषय होइन। तर, तपाईंको बेदाग इमानको फगत जयकार गरेर मेरो बेइमान मन सफा हुन्छ भन्ने मलाई कुनै विश्वास छैन। म त्यो पाखण्डी हँ, जो गीत त तपाईंको गाउँछ तर हाडजोर्नीको समस्या आए उपचार टिचिङमा नगराएर निजी अस्पताल जान्छ। किनभने मलाई तपाईंको टिचिङ अस्पतालको असली हालत थाहा छ। मलाई यो पनि थाहा छ, तपाईं दण्डाधिकारी बनेर ‘फलानोलाई डिन बना र डिस्कानोलाई त्यहाँबाट निकालु भन्न त सक्नुहुन्छ तर, आफैं ‘डिनु पदको जिम्मेवारी लिएर परिवर्तन ल्याउने चुनौतीबाट भाग्नुहुन्छ। एकबारको जुनीमा शिक्षण अस्पतालको डिन बनेर चलाए कसो होला डाक्टर साब ?’
उनले आफ्नो आलेखमा प्रधानन्यायधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई समेत केही सुझाव दिएका छन् । उनले अदालतको गरिमा कायम राख्न अदालतको मानहानी सम्बन्धि कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्नै विचार राखेका छन् ।
उनले सुझाव राख्दै भनेका छन् ‘अब के गर्ने त ? डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा जुन विषयहरू उठाउनुभएको छ, माथेमा आयोगको रिपोर्ट तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी तत्काल व्यवस्था गरिनुको विकल्प छैन। अदालतभित्र देखिएका विसंगतिहरूको प्रश्नलाई चाहिँ तत्कालीन र दीर्घकालीन दुई पक्षमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ।
दीर्घकालका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ, सञ्चालन प्रक्रिया, महाअभियोग प्रावधानसम्बन्धी केही संवैधानिक धाराहरूमा संशोधनको दरकार छ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतलाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने बिचार राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा उठाइएका टिप्पणीले सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुन्छ कि हुंदैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले आलेखमा भनेका छन् ‘बदलिँदो समाज र मान्यताको परिपेरक्ष्यमा, वैश्य युगको कठोर धरातलको सन्दर्भमा, अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सबै कानुनी प्रावधानहरूमाथि पुनर्विचार गरियोस्। कुनै फैसलाको विशेषको आलोचना, कुनै न्यायाधीश विशेषसँग विमति राख्नु९ नेपालको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हो वा होइन भन्ने निर्णय होस्। एक यस्तो नजिर बसोस्, जसले सबै नेपालीलाई आफ्नो अदालतमाथि थप गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस्। हामी सबै मिलेर अदालतप्रति सन्देह र ‘कानेखुसीको वातावरणबाट मुक्त होऔं। हुनै पर्छ।’
ओली सरकारको राम्रो काम : बैंकबाट ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक राखेका गरिब किसानको पुरै ऋण मिनाहा गर्यो, ऋण मिनाहबाट ६ सयदेखि ७ सय परिवार लाभान्वित हुने
काठमाडौं – सरकारले कृषि विकास बैंकबाट साझा सहकारीले करिब ३५ वर्ष अघि लिएको साना किसानको